ILLAAHAY DULMIGA WAA XARIMAY HARTTI DHULKIISA ISAGAA LEH MANA DAMAACIYIN HARGAYSA | Saadaal Media
ILLAAHAY DULMIGA WAA XARIMAY HARTTI DHULKIISA ISAGAA LEH MANA DAMAACIYIN HARGAYSA
Jul 9, 2018 - 1 Jawaab
Waxaa haboon hadaynu nahay umadii soomaaliyeed,in aynu isu garawno sheegno runta iyo xaqa gartana goyno,inagoo meel iska dhigayna daciifnimo iyo jileec iyo munaafaqad taasoo qofka ku hogaamisa cadaab daran maalinta qiyaame.Aduunka inta la noolaanayo ayaa ah maalmo yaroo kooban,haday sidaa tahay maha in aan iskaga ciyaarno mustaqbalkeena dhabta ah ee aakhiro. hadaan intaa ka gudbo.
Waxaynu nahay umad soomaaliyeed,waxaynu leenahay dal aad u balaaran oo leh khayraad kala duwan mahadaa waxaa leh ilaahii inasiiyay. dhul inaguma yara sida dalalka qaarkood oo tusaale ahaan badahoodii aasay si ay guryo uga dhistaan waayo barigii ayaa ku yaraaday,waxaa kamid ah talyaaniga iyo holand tusaale ahaan.
Waxaa jira in dadka soomaaliyeed yihiin beelo iyo jifooyin kuligoodna wada yihiin dad wada dhashay oo isku isir ah oo wada ah soomaali.Hada soomaalidu maha mid dhalatay ee waa soo jireen filweyn.waxaynu leenahay dhaqan inoo gaara iyo diin.intii aan lahelin dawlad nimada iyo intii lahelayba beelaha soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwo xushmeeya darisnimada iyo ood wadaaga.
Reer waliba iyo jifo waliba waa layaqaan sumada xoolahooda,waa layaqaan ceelasha ay leeyihiin,waa layaqaan dhulka iyo dagaamada ay dagaan oo ay leeyihiin.sidaa oo ay tahay soomaalidu waligeedba way isa siin jirtay in labadii daris ahiba mid markii dhulkiisu abaar noqdo uu kan kale ee walaalkiis ah dhulkiisa daaqsado xoolihiisa,oo uu kala cabo ceelashiisa iyadoo arintaa xeer kayiilay layskuna tix galin jiray.
Waxaa reeban in beeluhu isku soo duulaan oo dhul uusan lahayn ku qabsado wallaalkiis dariska la ah.majiro dhul iska banaan oo cidina aanay lahayn dalkeena.beeluhu xadgudub dhuleed ma dhici jirin haday dhacdana ninka dulmiga wada ee dhulkaa kusoo xadgudbay waa la qaban jiray,dhinacna laga wada noqon jiray. isna waa gar qaadan jiray haduu madax adaygana waa layska dhicin jiray.
Guumaysigu shalay markuu inoo yimid dadkeenii ayuu kala qaybiyay,si uu danihiisa ugaaro dhulkana isagu malahayn,markii awoow yaalkeen soomaaliyeed iska celiyeen cadawgii gumaysi waa iska tagay oo dhulkiisii ayuu adaay mana dagana hada soomaaliya oo dhul kumalaha. beel soomaaliyeed oo runta og iyo dagaankeeda in ay ku doodo shisheeyihii gumaysi ee inaga tagay ayaa isiiyay dhulkan beesh hartti waxay ilatahay in aysan ahayn maangal iyo xaq midna. haday dhihi lahaayeen beel kale oo soomaaliyeed ayaa isiisay xataa wax bay ahaan lahayd ee waxay ku doodayaan gumaysigii baa adiga kaa xoogay ana isiiyay.
Halkaa waxaa soomaali uuga cad sida ay uqodo dheertahay xiriirka ay la lahaayeen gumaysiga iyo in ay xubi wayn u hayeen in gumaysiguu sii joogo soomaaliya oo haysto. qofku marka uu qof walaal ah ama islaam ah wax ku sheeganayo waxaa lagu kala baxaa oo la daliishadaa waa qawlka illaahay iyo qawlkii nabigeena caleeyhi salaatu wasalaam. Bal walaalayaal soomaaliyeey eega dadkani waxay daliishanayaan oo ah Qawlkii gumaysigii ingiriis!!
Inagu waxaynu nahay muslimiin suni ah oo illaahay yaqaan,dhul aadan lahayn taako ninkii xoog sir iyo caad ku qaadaa maalinta qiyaame dushaa loo saaraa culaabtiisa isaga lagalinayo cadaab daran oo shadiid ah.Hartti oo la ogyahay xoogiisa iyo asalkiisa taariikheed ma uu doonayo in uu qabsado Hargaysa iyo Burco,macnuhuna waxaa weeye maha uun xoog baan leeyahay ee waxaa weeye illaalinta xuduuda illaahay ina faray oo ah dulmigu waa xaaraan.
Balkawarama hartti oo maanta qabsada Burco? maxay soomaali oran lahayd? waxay oran lahayd hartti waa khaldan yahay haku ekaado dhulkiisa oo walaalkii ha uga baxo dhulkiisa oo ha nabad galiyo. laakiin sow munaafaqnimo iyo ehlu naarnimo noqon mayso iyo daciifnimo in dhulka hartti beesha ku soo duushay ee qabsatay ee walina u tafaxaydan indho adaygaas inay ku dagaalamaan in runta loo sheegi waayo soomaaliyeey walaalayaal saw khalad wayn maha?
Sawkama been sheegayno diinteenii iyo dhaqankeenii garta la goyan jiray? walaalayaal illaah baan idinku dhaarshee ma laas caano oo ah dhul hartti ayaa beesha isaaq leedahay? illaah baan idinku dhaarshee madawlad baa jirta soomaaliyeed oo aan ahayn dawladaa mogdisho fadhida oo la aqoon san yahay oo soomaali leedahay?
Dhabtu waxay tahay isaaq dulmi cad buu wadaa iyo in dad soomaaliyeed ku dhinto si khasaaro ah maadaama hartti dhulkiisa leeyahay marwalba xili hore hada iyo mustaqbalkaba. Dhabtu waxaa weeye dawlad dalkeena kama jirto illaa taa mogidisho fadhigeedu yahay mooyee.marka yaa loo dawladaynayaa!!?
Waxaa aad layaab u leh raganimo xumida dadka soomaaliyeed oo noqday dad aan lahayn karti iyo garasho ay labadii dadkooda is qabsata ay kukala saaraan oo runta u sheegaan kan gardaran sida dhaqankeenu waligii ahaan jiray diinteenuna nafarayso. hadii marka gardaraaloowga la qaban waayo waxaa dhacaya dulmi kadibna caro allaa dhalanaysa.
Waxaa yaab leh in isaaq laba beelood oo kamid ahi labaxeen ama loo bixiyay JEEGAAN kuwanoo ku dooda wanala dulmiyay iyo gud ayaan doonaynaa oo soomaaliya inteeda kale waa ka goosanaynaa! maanta waxaan aragnaa in uu isagii dulmiga ka cabanaayay wax dulmayo oo dad islaameed dhulkoodii iyo maal koodii ku haysto.Waxaan arkaynaa beelihii jeegaanta kasoo haray oo xor u ah fikirkooda qabana in ay dadkooda soomaaliyeed kamid ahaadaan wax gooni u goosad ahna aanay doonayn ayay qasbayaan oo xaqirayaan oo leeyihiin waa in aad si khasab ah noola qaadataan gutaanka aan anagu rabno!! maxaa hadaba loo eedaynaayay siyaad bare dadkuu caburin jiray! hadii isagii laga sii xun yahay inbadan!
Gunaanadkii iyo Gaba gabadii
Walalayaal soomaaliyeey,dhibkan oo dhan waxaa keenaya dawlad la aanta dalkeena ku habsatay,shaqsiyaad ka faa iidaysanaaya dhibta haysata soomaaliya iyo maqnaanshaha dawlad wali hanata dhulkeena oo dhan bad iyo bari iyo cirba ayay ka faa iidaysanayaan iyagoo fulinaya afkaaro shisheeye iyo guumaysi.waad garan karaysaan in beel soomaaliyeed oo dhul beelkale oo dariskeeda iska soo galaysaa jirin dadkuna uusan raali kawada ahayn arintaa,ee waxaa wada shaqsiyaad kooban oo soomaali dhagraaya lana soo adeegsaday oo ku xiran shisheeye cadaw u ah soomaaliya.
Beesha isaaq guud ahan iyo gaar ahaan JEEGAANTU midna dhul hartti kuma soo duuli jirin mana iman jirin maxaa keenay hada? waa ogyihiin in aysan lahayn dhulkan dagina.hada ogoow waxa kani maha maskax soomaaliyeed waa mid kabaxsan soomaali oo cadaw inagu soo dhextuuray isagoo adeegsanaya kuwa madaxda inoo ah.
Dadkeenu isaaqa iyo harttiga iyo inta kalaba waa isku mid,waana wada dhasheen,waa isku diin,waa isku af,waa isku isir,waa isku dad iyo dal. Markaynu ahayn dawlada qofkastoo soomaaliyeed meeshu rabo ayuu kadagi jiray dhulkiisa waqooyi iyo koonfur.dhibku waa dawlad la aanta soomaaliyana xor maha waa in aan xorawnaa oo dalkeena ka hirgalinaa dawlad ina difaacda oo cadawga shisheeye iyo kuwa u adeegayaba inaga qabata. dawlad nimaa larabaa.
Hadii dalkeenu dawlad hanata guud ahaan lee yahay,maanta TUKARAQ dulmiga ka jiraa kama jireen.Caasimadeena dadkeena iyo dhilintii mustaqbalkeena laguma qarxiyeen oo laguma laayeen.iska jir isaaq iyo hartti iyo beelaha kalaba waa iisiman yihiin hadafkayguna waa mugdiga aan kabaxno u baxno soomaalinimada iyo dawladnimada.dhulkeena ama ha ahaado waqooyi galbeed ama ha ahaado koonfur soomaali baa leh meeshaad rabtaadna kadagi oo aad uuga noolaan hadaad tahay muwaadin soomaaliyeed,inta sharcigii iyo dawladnimadii ay ka hana qaadayso beeluhu haku kala ekaadaan dagaankooda ileen waa is naqaan dulmiguna ma fiicna waana lagu cadaab galaa.
Hadii xaqa la sheegi waayo kuligeen danbiga waxbaan ka yeelanaynaa walaakaa haduu gardaran ayahay u hiili oo ka qabo gardarada,haduu gar leeyahay walaalkaa u hiili oo ka qabo kan dulmaaya. Anigu ma aamin sani in PUNTLAND tahay dawlad caalamka laga aqoon sanyahay ka dawlad ahaan iyagu haba sheegteene,sidoo kale ma aamin sani SOMALILAND in ay tahay dawlad caalamka laga aqoon san yahay iyagu haba sheegteene,kol hadaan dawladba la ahayn ee beelo deegaankoodii dagan uun layahay,garta iyo xaqu waxaa weeye in beel waliba ku ekaato degaankeedii.
Waxaa hadaba gardaran oo daalin cad ah ninka walaalkii ku soo duulay oo dagaankiisii ku haysta.maha in labaduba khaldan yihiin,marabo in aan noqdo sidii munaafiqii yiri calina gar leh caydiidna gar leh oo ah waligeedba halays dilo.
Laba is qabatay mid baa gardaran midna garbuu lee yahay.Hadaba walaalayaal soomaaliyeey hadaad xoog leedihiin oo beelo waa wayn oo khatara tihiin maad dalkeena ka qabataan oo ciidamadan aad soo dhoobteen TUKARAQ kaga saartaan dalkeena cadawgan afka duuban ee dadkeenii gumaadaya!! maad dawlada soomaaliyeed ee hada jirta garab istaagtaan oo taageertaan? masidan ayaa ah raganimo war isdaba qabta oo dalka iyo diinta iyo dadka soomaaliyeed bad baadiya.
waxaan ku talinayaa ninka soo duulayoow ku noqo walaale dhulkaagii wiilashana haynaga dhamayn cadawbaa ina sugayee,kan deegaanka iska leh isna waxaan lee yahay edeb u joog dhulkaaga nabadana ka shaqee iyo walaalnimada.dalkii aan lahayn dawlad dhibkan oo kale ayaa la soo darsa iyo wax ka xun.
Qoraalga calacal wax mataro.beesha hargaysa iyo burco waa dhul iyo shacab qabsasho. Taani baa cadeeyay 26 sano baan burco iyo tukaraq usoo soconay.hartina wuu arkayay. In duulaan lagusoo yahay. Waxayna ka dhigeen inay dhulbahante. Kalaqaybqabiyaan. Ina kaahin. Baa kukhudbeeyay.muse yiri awawyadiin baan ka adkasnjiray. Faysal yiri ardada darood laaya boorama. Samatar isku sawiray tukaraq. Maxaad sugaysaa. JIHAADKA WAA XAQ IN LAGU JIHADO EE HARTI. MMMARADA IDINKA DHACDAY. TARIIKHXUMADA ISKA DULQAADO.